မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths IXXX
Posted by Kyaemon on Nov 25, 2016 in Business & Economics, Education, Think Different |2comments
နှစ်ရပ် ဟာ အမေရိကန်ရဲ့အဓိကအရေးတွေမဟုတ်ပါ၊(ပထဝီနိုင်ငံရေးပါ) အာရှမှာ စစ်အေးတိုက်ပွဲအသစ်
တရပ်ဝင်နေတယ်၊တချိန်ကရန်သူဗီယက်နမ်ကိုစည်းရုံးပြီးတရုပ်ကိုဝိုင်းရံ ( Contain) ဘို့လုပ်နေတယ်၊
ကချင် ဒေသခံတွေဆန္ဒပြတာကိုငွေတွေနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်။ (တရုပ်လုပ်တာကိုကောင်းတယ်လို့ဘယ်ပြောမလဲ?)
အနောက်မီဒီယာနဲ့ ဩဇာခံတွေ NGOတွေ ကမြစ်ဆုံရေကာတာမကောင်းကြောင်း ရးတာတွေကိုဆန်းစစ်ရမှာပါ၊
ထွက်လာတဲ့လျှပ်စစ် ၉ဝ % ကိုတရုပ်ဆီပို့မယ်ဆိုတာကိုကွက်ကွက်ပြီးပြောကြတယ်၊
ဆင်တကောင်နဲ့မျက်ကန်း ၆ ဦးနဲ့တူနေတယ်၊
သတင်းသမားတိုင်းမှာလိုက်နာရိုသေရမဲ့ကျင့်စဉ် Professional Ethics ဆိုတာရှိပါတယ်၊
ပရိသတ်အတွက် အမှန်အကန်နဲ့ပြည့်စုံအောင် ရေးပေးတင်ပြဘို့ပါ၊
၁ဝ % ပေးပြီး ၉ဝ % ယူသွားတဲ့သယောင်ယောင် ဆိုတာ ပြောင်ချသလိုဘဲ၊ ၁ဝ % ကအခမဲ့
၉ဝ % က ငွေပေးပြီးဝယ်တာ၊အခွန်လဲကောက် အမြတ်ထဲကထပ်ခွဲယူ၊နောင်အပိုင်ရမယ်
မြန်မာက ၆ဝ % အနှစ် ၅ဝ ကျရင် မြန်မာက ၁၀ဝ % ကိုမရေးပါ၊ ပဌမ နှစ် ၅ဝ မှာ $ ၅၄ ဘီလျှံ billion
နောက် ၅ဝ နှစ်မှာ $ 90 billion $ ၉၁ ဘီလျံ စသဖြင့်ရမှာကိုမရေးပါ၊
ရေကာတာပြိုမယ်ပြိုမယ်နဲ့လိုက်ချောက်နေတာ (အနောက်နိုင်ငံရေကာတာ သောင်းချီကျတော့
အဝေမတည့်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းပျက်အောင် လူတွေကိုစိတ်ကစားသွားတယ်လို့ယူဆရပါတယ်၊Termination of Myitsone Dam the Only Option, Say Local Kachin
The China Power Investment Corporation is the developer. Under the agreement, China would receive about 90 percent of the power generated.“If the dam breaks, it will sweep away the people to the south of it [downstream of the Irrawaddy River]. This isn’tawild guess, but an actual possibility,” said Dr. Manam Tu Ja, chairman of the Kachin State Democracy Party (KSDP).—————–
Institute for Security & Development (ISDP)
Notwithstanding the contested provisions of the “90/10” contracts which were negotiated almostadecade Jun 5, 2015Myanmar Halts China Dam
Around 90% of the power generated by the 6,000 megawatt plant was earmarked to go to China, with state-run China Power Investment Corp. earning about 70% of its profits, according to International Rivers,aBerkeley, Calif., advocacy group. The plant was to go online in 2018.Burma dam: Why Myitsone plan is being halted30 September 2011
. The vast bulk of the electricity generated – some reports say as much as 90% – was destined for export to China.
If the project were to continue as planned, about 90 percent of the electricity generated would be sent to neighboring China while local residents could face possible flooding and environmental degradation.
The China Power Investment Corporation is the developer. Under the agreement, China would receive about 90 percent of the power generated.
ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၈ David Grey ပြောတဲ့ Brazil က သင်္ခဏ်းစာကိုညွှန်းလိုပါတယ်၊
Columbia University က Xiao Bao ရေးစာတမ်း က ဒီပြသနာကိုလေ့လာတယ်၊ ၁၉၉၆ မှ ၂၀၁ဝ ထိ ကာလမှာ တရုပ်ပြည်က
ရေကာတာရဲ့အကျိုးအမြတ်ကို ဒေသခံတွေအတွက်ဘယ်လိုမျှဝေစောင့်ရှောက်ခဲ့တာကိုအောက်ပါ စာတမ်းပြုတယ်၊
Dams and Intergovernmental Transfer – Columbia University
by X Bao – ‎2012 – ‎Cited by 1 – ‎Related articles Xiaojia Bao ∗
Abstract: Large-scale dams are controversial public infrastructure projects due to the unevenly distributed benefits and losses to local regions. The central government can make redistributive fiscal transfers to attenuate the impacts and reduce the inequality among local governments, but whether large-scale dam projects are Pareto improving is stillaquestion. Using the geographic variation of dam impacts based on distances to the river and distances to dams, this paper adoptsadifference-in-difference approach to estimate dam impacts at county level in China from 1996 to 2010. I find thatalarge-scale dam reduces local revenue in upstream counties significantly by 16%, while increasing local revenue by similar magnitude in dam-site counties. The negative rev- enue impacts in upstream counties are mitigated by intergovernmental transfers from the central government, with an increase rate around 13% during the dam construction and operation periods. No significant revenue and transfer impacts are found in downstream counties, except counties far downstream. These results suggest that dam-site counties benefit from dam projects the most, and intergovernmental transfers help to balance the negative impacts of dams in upstream counties correspondingly, making large-scale dam projects close to Pareto improving outcomes in China.
Sharing the benefits of large dams
IIED Jamie Skinner
A new wave of African dam projects should learn lessons from the past to improve local outcomes.
….Instead of bearing the costs of conflicts – in both money and lost development opportunities – governments could channelaportion of resources created by dams to displaced communities, ensuring local people gain directly from the projects. For example, based on insights from the case studies,
ရေကာတာက အရွယ်အစား သေးရင် လျှပ်စစ်အားရောင်းရငွေပမာဏ သေးလို့
၂ % မှ ၃ % ထိ တက်ပေးတာဖြစ်မှာပါ၊စုံစမ်းစရာပါ၊
GWI is now helping Niger authorities designalocal development fund receiving two to three per cent of hydropower revenues at Kandadji.
Over the dam’s 100-year life, this fund can meet the changing needs of local people – such as additional schooling, investments in agriculture or better water supplies – and provide flexible support that reduces dependence on the government to resolve resettlement conflicts. Besides hydropower revenues, shared benefits might include access to irrigated land,ashare of electricity, orastructured fishery.
ယူကေ အစိုးရကငွေထောက်ပံ့ပြီး iied အဖွဲ့ ဝင် Jamie Skinner ကလဲနိုင်ငံတကာဆီရောက်ရှိကာ
Jamie Skinner jamie.skinner@iied.org
80–86 Gray’s Inn Road London, WC1X 8NH United Kingdom
Tel: +44 (0)20 3463 7399 Fax: +44 (0)20 3514 9055 www.iied.org
IIED welcomes feedback via: @IIED and www.facebook.com/theiied
This research was funded by UK aid from the UK Government, however the views expressed do not necessarily reflect the views of the UK Government.
The variety of schemes used around the world shows that there is no one blueprint for benefit sharing. The common thread is that hydropower investments generate significant financial flows.
Different countries have triedarange of regulatory mechanisms to redistribute those financial benefits and to alleviate — sometimes retroactively — the unexpected impacts from dam construction. Regulation helps to ensureaconsistent approach is followed, not only by public and private sector hydropower projects, but also by existing and new projects.
အပေးအယူ ညှိနှိုင်းရာမှာ လက်နက်တန်ဆာပလာသဘွယ် (နည်းလမ်းကောင်း)တခုဖြစ်တယ်၊
မလိုအပ်တဲ့ အငြင်းပွါးမှု အခြေအတင် တွေသက်သာပြီး ရေအားလျှပ်စစ်ကို ရေရှည်ခံစားနိုင်ကြမယ်၊
It isatool that can empower local communities in their negotiations on project benefits and reduce the risk of unnecessary controversy that would undermine public confidence in sustainable hydropower.
When regulatory measures are informed and governed by affected communities, directly addressing specific impacts, they can help manage the social and environmental risks of large-scale hydropower.
Spread more widely, they will support global efforts to make hydropowerasustainable development technology.
ဗိုလ်ချုပ်ပြောသလို ဗမာတကျပ် ကချင်တကျပ် ချင်းတကျပ် ရှမ်းတကျပ် သာတူ
ညီမျှ အေးအတူပူအမျှ မူကဘဲကောင်းပါတယ်၊
လူမျိုးစုဒေသ ဒေသခံတွေဘယ်လို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ရံပုံငွေတွေချမှတ်ခွဲဝေပေးမယ်ဆိုတာ
၂၊ ပြည်မ အကျိုး
တဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်၊ရေကာတာ လုံးဝ မ စ ခင်ကတမျိုးပါ၊လျော်ကြေးဆိုတာမှမရှိတာ၊
၃က၊ ရေကာတာလုပ်လက်စနဲ့ဆက်လုပ်ရင် $ သန်း ၁၀၀ဝ ($ တဘီလျံ)လျော်ဘို့မလို၊
ဆက်မလုပ်ရင် $ တဘီလျံလျော်ရတယ်,
ဥပမာ ၄ထပ်တိုက်ဆောက်တာ၂ထပ်လဲရောက်လို့စွန့်ပြစ်ကာကန်ထရိုက်တာကိုလျော်နေမဲ့အစားကျန်၂ထပ်ကိုဆက်တင်ရင်အားလုံးအတွက်ကောင်းမယ်ဆိုတာ ဗေဒင်ဆရာကိုမေးနေဘို့မလိုပါ၊ ပါရဂူဘွဲ့ရသူသုခမိန်တွေကိုမေးနေဘို့မလိုပါ၊
“x” မျဉ်းကြောင်းကနေ “၈” 8 ဂဏန်းနေရာ အရစ်ကလေးကိုရှာပါ၊
“၈” 8 ဆိုတဲ့ဂဏန်းအောက်မှာ အစက်ကလေးက ၂ထစ်ရှိတယ်၊အပေါ်ကိုကြည့်ရင်
အဖြေက ၆ ထစ် (၄ထစ်+၂ထစ်)]
၃ခ၊ ဆက်လုပ်ပြီးလည်ပတ်လို့အနှစ် ၅ဝ မှာ၅၄ဘီလျံရမယ်၊
(အစက် “P” က ၅ ထစ် မြင့်တယ်၊အစက် “S” က မြေအောက် ၃ထစ် ဆင်းရတယ်၊
ဒီ အစက် ၂လုံးကတည့်တည့်မဟုတ်သော်လည်း “၈” ထစ် ထက်မနဲကွာတယ်)၊
ဆက်လုပ်လို့ အနှစ် ၅ဝ မှာ $ ၅၄ ဘီလျံ ရမယ်လို့ပြောရင် သင်္ချာ
နည်းအရ သိပ်မမှန်ပါ၊ ဘာပြုလို့လဲ ? အရှုံးသက်သာလိုက်တဲ့လျော်ကြေးကလဲ
စင်စစ်အားဖြင့် $ ၁ ဘီလျံ လက်ထဲကငွေ မထွက်ရတဲ့အပြင်
$ ၅၄ ဘီ လျံ ငွေသစ်တွေကဝင်လာလို့ $ ၅၅ ဘီးလျံ ရလိုက်တာကို
အာက်ပါ ” လင့် link” ကိုနှိပ်ပေးပါ။